အိုင်အိုဒင်းဆိုတာ ဘာလဲ | Page2| Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
အိုင်အိုဒင်းဓာတ်ဆိုတာက လူတွေအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တစ်မျိုးပါပဲ။ ဒါပေမဲ့လည်း အများကြီးတော့ မလိုပါဘူး၊ နည်းနည်းပဲ လိုတာပါ။
အိုင်အိုဒင်းကို ပင်လယ်ထဲနဲ့ အချို့သောမြေကြီးတွေထဲမှာ သဘာဝအတိုင်း တွေ့ရှိရပါတယ်။ ငါး၊ ပုစွန်၊ ပင်လယ်ရေညှိစတဲ့ ပင်လယ်ထွက် အစားအစာတွေ၊ အိုင်အိုဒင်းဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ မြေကြီးတွေမှာပေါက်တဲ့ အပင်တွေ၊ အိုင်အိုဒင်းကြွယ်ဝတဲ့ စားကျက်မြေမှာ ကျက်စားတဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ အသားတွေမှာလည်း အိုင်အိုဒင်း ပါပါတယ်။
တချို့သောဆားတွေနဲ့ ပေါင်မုန့်တွေထဲမှာလည်း အိုင်အိုဒင်း ထည့်သွင်းပြုလုပ်ထားပါတယ်။
>> အိုင်အိုဒင်းဓာတ် ဘာလို့လိုအပ်သလဲ?
သိုင်းရွိုက်ဂလင်းကနေပြီးတော့ ဟော်မုန်းတွေ ထုတ်လုပ်ဖို့အတွက် အိုင်အိုဒင်း လိုပါတယ်။
စားသုံးတဲ့အစားအစာထဲမှာ အိုင်အိုဒင်း လုံလောက်စွာမပါရင် အိုင်အိုဒင်းဓာတ် ချို့တဲ့စေပါတယ်။ အိုင်အိုဒင်းချို့တဲ့တဲ့အခါမှာ သိုင်းရွိုက်ဂလင်းကို ကြီးလာစေပြီးတော့ လည်ပင်းကြီးစေပါတယ်။ လည်ပင်းကြီးရောဂါရတဲ့အခါမှာ -
● ဟော်မုန်းထုတ်တာကို သွားပြီး သက်ရောက်မယ်။
● အစာ မျိုချရခက်တာ၊ အသက်ရှူရ ခက်တာတွေ ဖြစ်လာမယ်။
● သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်း ချို့တဲ့ပြီးတော့ ကိုယ်အလေးချိန်တွေ တက်လာတာ၊ ဆံပင်တွေခြောက်၊ အမွေးတွေ ကျွတ်၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်၊ အအေးမခံနိုင်တာနဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျတာ စတဲ့ လက္ခဏာတွေ ဖြစ်လာစေပါတယ်။
● ကလေးတွေမှာဆိုရင် ကြီးထွားမှု ရပ်တန့်ပြီးတော့ ဉာဏ်ရည်မမှီတာ၊ IQ နည်းတာတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
>> ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်နဲ့ နို့တိုက်မိခင်တွေမှာ အိုင်အိုဒင်းဓာတ်ရဲ့ အရေးပါပုံ
သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းက သန္ဓေသားလေးရဲ့ ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြောစနစ် ကြီးထွားမှုကို ထောက်ပံ့ပေးရတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာဆိုရင် သိုင်းရွိုက်ဂလင်းက ပိုအလုပ်လုပ်ရပါတယ်။ သိုင်းရွိုက်ဂလင်း ပိုပြီးအလုပ်လုပ်ရတော့ အိုင်အိုဒင်းတွေ ပိုလိုလာတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေမှာ အိုင်အိုဒင်းချို့တဲ့နိုင်ချေ ပိုများပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ အိုင်အိုဒင်း အလွန်အမင်းချို့တဲ့ရင် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်း၊ ကလေးအသေမွေးခြင်း၊ ဉာဏ်ရည်မမှီခြင်းတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
မွေးပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့လည်း မိခင်နို့ပဲ တိုက်တဲ့ကလေးတွေက သူတို့ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ အိုင်အိုဒင်းကို မိခင်နို့ကပဲ ရယူရပါတယ်။ ဒီတော့ နို့တိုက်မိခင်မှာ အိုင်အိုဒင်းချို့တဲ့ရင် ကလေးမှာပါ အိုင်အိုဒင်း ချို့တဲ့နိုင်ပါတယ်။
ဒီ‌တော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေ၊ နို့တိုက်မိခင်တွေနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့ ကြိုးစားနေသူတွေအနေနဲ့ တစ်နေ့ကို အိုင်အိုဒင်းဆေး 150 micrograms သောက်သင့်ပါတယ်။ အစကတည်းက သိုင်းရွိုက်ပြဿနာရှိသူတွေဆိုရင် ဆေးမသောက်ခင်မှာ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
>> အိုင်အိုဒင်းကို ဘယ်ကရမလဲ?
မိသားစု စားသုံးတဲ့ အစားအစာတွေထဲမှာ ဒီအစားအစာလေးတွေကို ထည့်စားပေးမယ်ဆိုရင် အိုင်အိုဒင်း လုံလောက်စွာ ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။
● အိုင်အိုဒင်းထည့်ပြီး ဖုတ်ထားတဲ့ပေါင်မုန့်တွေ - ပုံမှန်ပေါင်မုန့်တွေမှာတော့ အိုင်အိုဒင်း မပါပါဘူး။
● ပင်လယ်စာ - တစ်ပတ်ကို ပင်လယ်စာ2ကြိမ်၊3ကြိမ်လောက် စားပေးသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ငါးစားရင်တော ့သေချာရွေးဖို့ လိုပါတယ်။ တချို့ငါးတွေမှာက ပြဒါးဓာတ် ပိုများပါတယ်။ ဆယ်လ်မွန်နဲ့ ပင်လယ်ရေညှိတွေကတော့ အကောင်းဆုံး အိုင်အိုဒင်းရင်းမြစ်တွေပါ။
● ဥအမျိုးမျိုး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အသား၊ နို့ထွက်ပစ္စည်း စတာတွေမှာလည်း အိုင်အိုဒင်း ပါပေမယ့် ပမာဏတွေတော့ မတူကြပါဘူး။
အသီးအရွက်ပဲ စားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ အိုင်အိုဒင်းဖြည့်စွက်ဆေး (သို့) အိုင်အိုဒင်းထည့်ပြီး ထုတ်ထားတဲ့ ပဲနို့ နဲ့ ပင်လယ်ရေညှိတွေ စားပေးဖို့ လိုပါတယ်။
အိုင်အိုဒင်းဆားမှာတော့ အိုင်အိုဒင်းကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ ဆား အစားများလွန်းရင်လည်း မကောင်းတော့ အိုင်အိုဒင်းကို အစားအစာတွေကနေ ရယူတာကတော့ အကောင်းဆုံးပါ။
>> လူတစ်ယောက်ကို အိုင်အိုဒင်းဓာတ် ဘယ်လောက်လိုအပ်သလဲ?
● အသက် ၆ လ အထိ - တစ်နေ့ကို 90ug
● အသက် ၇ လမှ ၁၂ လ အထိ - တစ်နေ့ 110ug
● အသက် ၁ နှစ်မှ ၈ နှစ် -တစ်နေ့ 90ug
● အသက် ၉ နှစ်မှ ၁၃ နှစ်အထိ - တစ်နေ့ 120 ug
● အသက် ၁၄ နှစ် - ၁၈ နှစ်အရွယ် ဆယ်ကျော်သက်တွေနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်၊ နို့တိုက်မိခင် မဟုတ်တဲ့ အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ တစ်နေ့ 150 ug
● ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေနဲ့ ကလေးယူဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ - 220ug
● နို့တိုက်မိခင်တွေဆိုရင် တစ်နေ့ 270ug လိုအပ်ပါတယ်။
>> တချို့လူတွေမှာ အိုင်အိုဒင်း ဘာကြောင့် လုံလောက်စွာမရကြတာလဲ?
တောင်ပေါ်ဒေသလိုမျိုးတွေမှာ မြေကြီးထဲမှာ အိုင်အိုဒင်းပါဝင်မှု နည်းပါးလို့ ဒီလိုဒေသက လူတွေမှာ အိုင်အိုဒင်းချို့တဲ့တာ များပါတယ်။
အိုင်အိုဒင်းဓာတ် များသွားတာ ဖြစ်နိုင်ပေမယ့်လည်း အသက်အန္တရာယ် ဖြစ်လောက်တဲ့အထိ အများကြီး စားမိဖို့တော့ ခက်ပါတယ်။ ဥပမာဆိုရင် တစ်ထိုင်တည်းနဲ့ cheese 1kg, (သို့) ကြက်ဥပြုတ် ၂၅ လုံး (သို့) နွားနို့ ၅ ဖန်ခွက်လောက်သောက်မှ အလွန်အကျွံ ဖြစ်တာပါ။
တချို့လူတွေက အိုင်အိုဒင်း များသွားတာကို တခြားသူတွေထက် ပို sensitive ဖြစ်ပြီးတော့ သိုင်းရွိုက်ဂလင်းပြဿနာတွေ ဖြစ်စေပါတယ်။ တချို့ဆေးတွေနဲ့ ဖြည့်စွက်ဆေးတွေမှာ အိုင်အိုဒင်းမြင့်မားစွာ ပါဝင်တာတွေ ရှိပါတယ်။